Factory Tour - Ningbo Sunshine Rubber Ma Plastic
W ith ebumnuche nke " mpi na ezi mma na ịzụlite na creativity " na ọrụ ụkpụrụ nke " lee ahịa 'ina ka nghazi ", anyị ga-agbasi-enye ruru eru ngwaahịa na ezi ọrụ anụ ụlọ na mba ahịa.
" Mepụta Ụkpụrụ, Ije Ozi Ahịa !" bụ ebumnuche anyị na-achụso. Anyị nwere olileanya na niile ahịa ga-iru ogologo okwu na nkwanyerịta bara uru imekọ ihe ọnụ na us.If ị chọrọ iji nweta ọzọ nkọwa banyere ọrụ anyị, Biko kpọtụrụ na anyị ugbu a!
T ọ na-arụ ọrụ ahụmahụ na ubi enyeworo anyị esorowo a ike mmekọahụ ahịa na mmekọ ma na anụ ụlọ na mba ahịa. N'ihi na afọ, anyị na ngwaahịa na e exported na ihe karịrị 15 mba na ụwa na e n'ọtụtụ ebe na site ahịa.
Na technology ka isi, na ịzụlite ma na-emepụta elu-edu ngwaahịa dị ka iche iche mkpa nke ndị ahịa. Na nke a echiche, na ụlọ ọrụ ga-anọgide na-azụlite ngwaahịa na-elu kwukwara ụkpụrụ na nọgidere mma na ngwaahịa, na ga na-enye ọtụtụ ndị ahịa na nke kacha mma ngwaahịa na ọrụ!
Na-ewere isi echiche nke " na-akpata ." Anyị ga redound elu na otu maka elu àgwà ngwaahịa na ezi ọrụ. Anyị ga-eme ihe iji na-ekere òkè mba na mba mpi na-a first- klas emeputa nke ngwaahịa a na ụwa.
C ertainly, asọmpi price, adabara ngwugwu na-adọ nnyefe ga-obi ike na dị ka kwa ahịa 'choro. Anyị nwere olileanya na-ewu azụmahịa mmekọrịta gị na ndabere nke ibe uru na uru na-adịghị anya. Obi ụtọ na-welcome kpọtụrụ anyị na-aghọ anyị kpọmkwem cooperators.
W e nwere ihe karịrị 10 afọ exported ahụmahụ na anyị na ngwaahịa nwere expored mba 30 gburugburu okwu. Anyị niile na-jide ọrụ echiche Client mbụ, Quality mbụ na uche anyị, na-echesinụ na ngwaahịa mma. Mmadụ Bịa na gị na ịga!
P roducts e exported na Asia, Mid-n'ebe ọwụwa anyanwụ, European na Germany ahịa. Anyị ụlọ ọrụ mgbe niile ike imelite ngwaahịa arụmọrụ na nchekwa izute ahịa na-agbalị ịbụ n'elu A na mụ mma na ezi obi na-eje ozi. Ọ bụrụ na ị nwere nsọpụrụ ime azụmahịa na ụlọ ọrụ anyị. anyị ga-maa-eme anyị nnọọ mma na-akwado gị ego na China.
" Good quality, Good ọrụ " bụ mgbe anyị echiche na Credo. Anyị na-etinye mgbalị nile ịchịkwa àgwà, ngwugwu, kwudịrị etc na anyị QC ga-elele bụla zuru ezu n'oge na-amị, na n'iru Mbupu. Anyị dị njikere igosi ogologo azụmahịa mmekọrịta ndị na-achọ elu àgwà ngwaahịa na ezi ọrụ. Anyị melite a obosara sales netwọk gafee mba Europe, North of America, South of America, Middle East, Africa, East Asia countries.Please kpọtụrụ anyị ugbu a, ị ga-ahụ anyị ọkachamara ahụmahụ na elu mma akara ule ga-eme ka azụmahịa gị.
H onest ka ọ bụla ndị ahịa na-anyị rịọrọ! Mbụ na klas na-eje ozi, kacha mma mma, kacha mma price na kasị na nnyefe ụbọchị bụ anyị uru! Nye ọ bụla ahịa ọma na-eje ozi bụ anyị echiche! Nke a na-eme ka anyị ụlọ ọrụ na-ahụ ihu ọma nke ndị ahịa na nkwado! Mmadụ Bịa na n'ụwa nile ahịa eziga anyị jụrụ ase na-atụ anya gị dị mma co-operation! Biko gị ase maka nkọwa ndị ọzọ ma ọ bụ arịrịọ maka dealership na họrọ mpaghara.
O Ua ụlọ ọrụ bụ isi na ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe n'ụwa nile; 80% nke anyị na exported na United States, Japan, Europe na ndị ọzọ na ahịa. All stof ji obi welcome ọbịa-abịa ileta anyị factory.